मधुमेहः बेइमान रोग::Hamro Koshi Awaj / awaz
सन्दर्भः विश्व मधुमेह दिवस/डा. मिमी गिरी
मधुमेहः बेइमान रोग
मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै विभिन्न रोगले जरो गाड्दै गइरहेको छ । मानिस र समाज जति आधुनिक बन्दै गयो, उतिनै विभिन्न खालका रोगहरुले गाँज्ने खतरा पनि बढ्दै गइरहेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छः के मोटोपना नै मधुमेह हो त ? यसको सोझो उत्तर होः होइन । यसको लागि विदेशीहरुको शरीरलाई हेर्न सकिन्छ । नेपालीको तुलनामा अन्य देशका नागरिक ज्यादा मोटो हुन्छन् । उनीहरुमा जम्मा २० प्रतिशतमा मात्रै मधुमेह छ तर दक्षिण एशियाका नागरिक ८० प्रतिशतमा मधुमेह छ । भन्न खोजिएको यो हो कि जसको पेट मात्र धेरै बढ्छ भने त्यो डायबिटिजको मुख्य कारक हो । हामी नेपालीहरुको शरीर लाग्ने भनेको पेट बढ्ने समस्या नै प्रमुख देखिन्छ । जसलाई हामी भाते पेट पनि भन्छौं । कतिले पुट्ट पेटलाई सानको रुपमा पनि लिने गर्छन् । तर त्यो ‘पुट्ट पेट वेलनेस होइन, इलनेस हो ।’
चिनी जस्तो बेइमानी रोगलाई समात्ने कोसिस गर्नुभन्दा पनि प्रो एक्टिभ मानसिकताबाट अगाडी बढ्नुपर्छ । चिनी भन्दा आफू अगाडि हिँड्न सक्यो भने त्यसलाई रोक्न सकिन्छ ।